Wacom dia manolotra ny fampisehoana penina Cintiq Pro 32 vaovao | Famoronana an-tserasera
Wacom dia mandefa ny fampisehoana penina Cintiq Pro 32 vaovao ho an'ireo matihanina amin'ny famolavolana
Wacom dia gala ho an'ny fampisehoana ny Wacom Cintiq Pro 32 vaovao, ny fanampiana vaovao ho an'ny mpanara-maso fifandraisana marobe izay mamela ny matihanina amin'ny famolavolana haneho ny fahaiza-mamorona rehetra.
Cintiq Pro 32 izay mbola manana sehatr'asa lehibe ary manatevin-daharana ny maodely Cintiq Pro 13-, 16- ary 24-teo aloha. Amin'izany fomba izany no tian'i Wacom hihaona amin'ny filàna rehetra karazana matihanina amin'ny famolavolana.
Ary izany ve ny Wacom Cintiq Pro 32 dia tamin'ity taona ity nahazo ny loka malaza Red Dot ho an'ny famolavolana vokatra. Amin'ity indray mitoraka ity, noho ny sehatry ny sehatr'asa midadasika, azonao atao ny manana sary, palety na menus amin'ny lafiny iray mba hanana ny habaka rehetra etsy ankilany hahafahana miasa amin'ny famolavolana karazana maodely sy zavatra rehetra.
Fampisehoana 4K miaraka amin'ny fahamendrehana loko 98% an'ny Adobe RGB ary ireo loko an'arivony tapitrisa dia misy soatoavina lehibe indrindra. Nampiasain'i Wacom ihany koa ny fotoana hanatsarana ny traikefa pen-on-screen miaraka amin'ny haitao vaovao an'ny Pro Pen 2, ny vera vita amin'ny vera, ny parallax amin'ny alàlan'ny fifamatorana optika ary ny latency zero.
La Cintiq Pro 2 dia manana laharana ergonomika tsy voatery ahafahantsika manitsy ny latabatra fiasana amin'ny filantsika. Niara-niasa tamin'i Ergotron izy io mba hitondra sandry ergonomika sy malefaka hamaly ny filan'ny mpanakanto rehetra rehefa ora maro isan'andro no lany miasa. Ny fanaraha-maso dia azo ajanona hatramin'ny 75 cm manerana ny latabatra.
Cintiq Pro 32 dia misy ao amin'ny magazay Wacom sy mpivarotra antsinjarany any Eropa amin'ny vidiny 3.549,90 euro. Ny Engine Wacom Cintiq Pro dia 2.699,90 euro. Ary raha te-peta-kofehy azy izao dia mahatratra hatramin'ny 399,90 euro ny sandry malefaka Wacom Flex Arm.
Wacom iray izay manome fitaovana kalitao bebe kokoa indray tahaka ny vao haingana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Wacom dia mandefa ny fampisehoana penina Cintiq Pro 32 vaovao ho an'ireo matihanina amin'ny famolavolana
Ahoana ny fanitsiana ny fomba fijery ao amin'ny Photoshop